Waa maxay saamaynta Parallax: sifooyinka ugu muhiimsan iyo qaar ka mid ah tusaalooyinka | Hal-abuurka khadka tooska ah
Waxaa jira saameyn ku dhex jira naqshadeynta, taas oo naga caawineysa abuurista animations muuqaal ah. Waxay noqon kartaa qayb ka mid ah waxa aan u naqaano aragtida sawirka ama aragtida sawirka. Naqshadeynta, marka aan ka hadalno aragtidan, waa sababta oo ah waxaan u baahanahay inaan fahamno oo la xiriirno, iyada oo loo marayo isku-dubarid, sida sawir gaar ah uu u dhaqmo xaalad gaar ah.
Taasi waa sababta qoraalkan, Waxaan u nimid inaan kaala hadalno saameynta parallax. Saamayn la yaab leh oo qayb ka ah naqshadeynta, iyo in marar badan aynaan u qaadan karin bini'aadam ahaan, laakiin si kastaba ha ahaatee, mararka qaarkood, ayaa nagu sii jira.
1 Saamaynta Parallax
2 Isticmaalka ugu muhiimsan ee saamaynta Parallax
2.2 Naqshad garaaf ama shabakad
3 Saamaynta Kale
3.1 Sharciyada Gestalt
3.1.1 Mabaadi'da isku midka ah
3.1.2 Mabda'a sii wadida
3.1.3 mabda'a xidhitaanka
Sida kor ku xusan, saamaynta Parallax ama sidoo kale loo yaqaan saamaynta duubista, waxaa loo yaqaanaa saameyn aad uga dhex jirta dhinaca aragtida aadanaha. Sida saameyn kasta, waxay ilaalisaa waxa aan fahamsanahay sida khiyaaliga indhaha, si fiican, saameyntani waxay abuurtaa nooc ka mid ah dhalanteedka indhaha iyo sidaas awgeed, waxay ahayd mid aad u joogta oo qayb ka ah beerta naqshadeynta.
Laakiin, wax kasta oo aan kuu sheegayno maxay keenayaan runtii?Hagaag, runtu waa taas waxay saamaysaa qaabka aynu u aragno iyo meelaynta walxaha ku jira goobteena aragga. Tusaale ahaan, haddii aan tufaax duldhigno miis oo aan ku aragno isha midig ama bidix oo daboolan, innagoo ka kale sii furan iyo wixii la mid ah, goobteena aragga ayaa markaa isbeddeli doonta markii ugu horeysay ee aan aragno.
Sidan, tufaaxu wuxuu u ekaan doonaa inuu u dhaqaaqay sabab qaar ka mid ah. Xalka jahawareerkan waa kala fogaanshiyaha ka jira indhaheenna, kaas oo u oggolaanaya shayga aan daawaneyno inuu abuuro saameyn dhaqaaq ama boodbood.
Saamaynta parallax sidoo kale waa qayb ka mid ah waxa aan u naqaano aragtida goobta. Meel bannaan waa dhex dhexaadinta walxaha laga helo, sidoo kale si habboon loogu sheego deegaanka. Haddii aan samayno jimicsiga fudud ee dhaqdhaqaaqa farta ama madaxa, waxaan arki karnaa inta shay oo hareerahayaga ah oo dhaqdhaqaaqaya isla wakhtiga dhaqdhaqaaqayaga.
Saamayntan sidoo kale Waxay aad ugu guntan tahay meel bannaan oo saddex-cabbir ah, tusaale ahaan, textures ama hadhyada qaarkood ayaa halkan ku ciyaara. Aragtida sawirka, marka aan ka hadlayno cilmi-nafsiga sawirka, waxaan sidoo kale ka hadalnaa sida ay ishayadu awood u leedahay inay la xiriirto fikradaha lafteeda iyo sida ay u arki karto shay kaliya oo hal mar la arkay ilaa saddex siyaabood oo kala duwan.
Marka la soo koobo, saameyntan ayaa si heer sare ah loogu sharxay adduunka naqshadeynta. Laakiin runtii ma garanaysaa sida aad noogu sheegto adeegsigeeda shuruudda lagu xidhay?Hagaag, haddii ilaa hadda ay kuguula ekayd hal-xidhaale, diyaargarow, waayo markaa waxaanu sharraxaynaa waxa loo isticmaalo si loo dabaqo tan. saamaynta iyo sababta ay u sameeyeen. Jawaabtu waxay u ekaan kartaa mid fudud, laakiin si aan u fahanno waa in aan furnaa garoonkeena maskaxeed oo aan isticmaalno aragti durugsan iyo cilmi-cilmiyeed saamayntan u muuqata mid la yaab leh.
Isticmaalka ugu muhiimsan ee saamaynta Parallax
Nashqado badan ayaa isticmaalay saamayntan ama kuwa la mid ah sababtoo ah waxa ay soo saarto iyo guud ahaan kuwa arka. Tusaale ahaan, waa kiiska ciyaaraha fiidiyowga. Mana aha wax la filan karo, maadaama ay had iyo jeer isku dayeen inay qabtaan dareenka si ay ishayadu awood ugu yeelato inay la socdaan dhaqdhaqaaqa goob ama xaalad gaar ah ilbiriqsiyo gudahood.
Ciyaaraha fiidyaha, saamayntani aad ayay ugu xidhnayd dhaqdhaqaaqa walxaha, oo sidoo kale loo yaqaan dhinac-rogid. Ilaa hadda, lama garanayo in qaar ka mid ah ciyaaraha fiidiyooga ah ay wali sii wadaan saamayntan, laakiin haddii aan dib ugu laabano 90-meeyadii, haa. Aynu xasuusanno in, bilawga xilliga ciyaarta fiidiyowga, saddex-cabbir ama laba-cabbir ayaa bilaabay in lagu ciyaaro. Ciyaaraha sida Mario Bros oo uu jilaagu isticmaalo dhaqdhaqaaqa noocan oo kale ah, ayaa sababay in daaweeyaha uu kala saaro asalka jilaha iyo walxaha shuruudda ku xidhay. Sidan oo kale waxay u muuqatay in ciyaarta muuqaalku ay u kala baxday saddex ama afar qaybood.
Ahaanshaha dhaq-dhaqaaq aad u dhakhso badan, isha daawadayaashu waxay abuurtaa dareen qoto dheer oo ay u muuqato in ciyaartu ay ku nuugi doonto mar uun.
Naqshad garaaf ama shabakad
Haddii aan ka hadalno naqshadeynta oo aan ka guurno adduunka ciyaaraha fiidiyowga, waxaan sidoo kale ka heleynaa naqshadeynta shabakadda. Naqshadaynta shabakadda, sida ereygeeda tilmaamayso, waxay u heellan tahay abuurista iyo habeynta bogagga shabakadda. Waa mid ka mid ah laamaha naqshadeynta garaafyada ilaa iyo hadda, waxay noqotay mid ka mid ah hawlaha loogu baahan yahay. Laakiin si fiican, waa maxay xidhiidhka ka dhexeeya saamaynta parallax iyo naqshadaynta shabakada?Hagaag, si fiican, noocyo badan oo sida Adidas, ayaa bilaabay bartamihii 2002, si ay u abuuraan bogag shabakad, iyada oo la adeegsanayo saameyntan.
Ujeedada ugu wayn ee laga lahaa isticmaalkani waxa ay ahayd in la soo jiito indhaha dadweynaha, iyada oo la abuurayo meel laba-geesood ah, lagana faa’iidaysanayo in bogga mareegaha uu yahay curiye laga dhex socon karo, waxa ay damceen in ay la jaan qaadaan qaabkii ay iyagu lahaayeen. waxay kordhin kartaa dhinaca saddex-geesoodka ah. Waa waxa aan hadda u naqaanno ficilka ku wareejinta cursorka bogga iyo in muuqaal ama qayb gaar ah uu nagu raaci karo dhaqdhaqaaqiisa.
Marka la soo koobo, saameyntani sidoo kale aad bay faa'iido u leedahay haddii aad ka fekereyso inaad abuurto naqshad bogga internetka ama meel gaar ah.
Marka la soo koobo, saamayntani aad bay ugu jireen nolol maalmeedkeena wayna sii jiraysaa, maadaama deegaankeenu had iyo jeer jiri doono. Waa in sidoo kale la ogaadaa, haddii aan ka hadalno suuq-geynta, shirkado badan ayaa isticmaala kheyraadkan halka ay suurtagal tahay in lagu dabaqo ololaha xayaysiinta. Saamaynta parallax maaha wax cusub, maadaama ay ku jirtay goob kasta oo naqshadeynta ah. Marka xigta, waxaan ka hadli doonaa saamaynta kale ee muuqaalka ah ee lagu dabaqay naqshadeynta oo laga yaabo inay xiiseyneyso inaad ku dabaqdo mashaariicdaada. Maskaxda ku hay in aan ka hadlayno maskaxiyan ka badan dhinacyada farsamada.
Xigasho: Caafimaadka Nool
Haddaynu ka hadalno saamaynta ay ku yeelanayso aragtida aadanaha, Waxaan sidoo kale ka hadalnaa sharciyada Gestalt. Sharciyadani waa aragtiyo taxane ah, oo uu abuuray bilowgii qarnigii XNUMXaad ee cilmi-nafsiga Max Wertheimer. Ujeedada ugu weyn ee sharciyadani waxay ahayd daraasad ku saabsan sida qofku u awoodo inuu u beddelo foomamka iyo walxaha oo uu ku biiro ama kala saaro iyaga oo u maraya goobteena muuqaalka iyo ka dib, waxa maskaxdeena ka soo baxa muuqaalka muuqaalka.
Waxaa jira wadar ahaan in ka badan 7 sharci, mid kasta oo iyaga ka mid ah ayaa ilaaliya fikrado kala duwan, taas oo abuureysa isbeddel cusub oo nagu jira.
Mabaadi'da isku midka ah
Mabda'a isku ekaanshaha waa mid ka mid ah sharciyada ka kooban sharciyada Gestalt. Xeerkani waxa uu nooga dhigan yahay, haddii nakhshad ama sawir ka kooban yahay curiye taxane ah oo isku mid ah, marka la eego midabka ama qaabka jireed, shakhsiga u fiirsada muuqaalka la sheegay, wuxuu abuuri doonaa muuqaal nidaamsan oo isku xiran oo maskaxdiisa ka mid ah walxahaas ama walxahaas.
Waa waxa aynu u naqaano saamaynta anomaly, saamayn isku dayaysa in ay jebiso oo tuso qaar ka mid ah curiyayaasha sida xubno muhiim ah.
Mabda'a sii wadida
Sida cilmi-nafsiga sawirku leeyahay, haddii aan meel dhigno dhowr walxood oo muuqaal ah si ay u maraan waddo gaar ah, isha bini'aadamku waxay u janjeertaa inay la socdaan iyaga oo eegaya. Tani waa waxa dhacaya haddii aan sawirno tartanka baabuurta, halkaas oo ay jiraan in ka badan shan walxood oo midba midka kale la dhigo.
Marka ay labada baabuur dhaqaaqaan, ishayagu waxay raacdaa dhaqdhaqaaq isku mid ah sababtoo ah waxay u egtahay in ay fiiro gaar ah u yeelato walxahaas gaarka ah. Caadi ahaan, nakhshadeynta, sharcigan waxaa loo adeegsadaa marka shay la doonayo in la iftiimiyo oo ujeeddada daawadaha ay tahay inuu diiradda saaro oo keliya.
Mabda'a xidhitaanku waa mid kale oo ka mid ah sharciyada qayb ka ah aragtida Gestalt. Waxa ay isku daydaa in ay indhaheenna hor dhigto jaan-tuskaas, foomamkiisa awgeed, aan si buuxda u xidhmin, sidaa awgeed waxa jira meelo cad cad oo madhan oo maskaxdeennu ay tahay ujeeddadeeda ugu weyn, si ay u midayso oo ay u abuurto muuqaal gaar ah.
Naqshadeynta, waxaan u isticmaalnaa sharcigan mar kasta oo aan raadineyno xasillooni, habkan, Foomamka xiran ayaa had iyo jeer loo tixgeliyey inay aad uga xasilloon yihiin foomamka furan, iyagoo soo saaraya dareenka dheelitirka.
Sida aan awoodnay inaan xaqiijino, nashqadayntu maaha oo kaliya dhinacyada farsamada: lakabyada, sawirada, vectors, Pantone khadadka, xarfaha, aqoonsiga shirkadda, boodhadhka, qalabka naqshadaynta, iwm. Sidoo kale waa marxalad uu cilmi-nafsiga soo galo. Sidan oo kale, naqshadeeyaha wanaagsani waa inuu awood u leeyahay labadaba inuu ogaado sida loo fuliyo qayb kasta oo ka mid ah qaybaha kor lagu magacaabay, iyo inuu ogaado sida loo kala saaro oo had iyo jeer haysto sabab uu ku sameeyo.
Haddii aad tan ka heshay qoraal cilmiyaysan oo xoogaa ka sii badan, waxaad sii wadi kartaa inaad baadho wax badan oo ku saabsan sharciyada Gestalt ama saamaynta is-barbar-dhigga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Waa maxay saamaynta parallax